Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay degmada Buurhakaba | SMC
Home WARARKA MAANTA Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay degmada Buurhakaba
Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay degmada Buurhakaba
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan qarax geystay khasaaro kala duwan oo Maanta ka dhacay degmada Buurhakaba ee Gobolka Baay,kaa soo lala eegtay Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka degmada.
Qaraxaan ayaa waxaa kasoo baxayaan warar kala duwan,waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso,isla markaana lagula eegtay Ciidamada Munishiibiyada degmada Buurhakaba meel u dhow Suuqa lagu iibiyo xoolaha ee Magaalada.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in qaraxaasi uu ku geeriyooday hal Askari halka ay ku dhaawacmeen laba Ruux oo la sheegay inay ahaayeen Shacab, kuwaas oo loo qaaday isbitaalka degmada si loogu daaweeyo.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa gaaray Ciidamada ka tirsan kuwa Booliska dgemada Buurkaba, iyaga soo sameeyay howlgal ay ku baadi goobayeen dadkii ka dambeeyay qaraxaas walow la sheegay in aysan dad u qaban.
Previous articleMogadishu-Afgooye road construction resumes after terror attack
Next articleDowladda Soomaaliya oo Warbixin kasoo saartay xaalad ka taagan Sh/Hoose